Uvimba weSilivere - Iphepha 4 lesi-4
Ixabiso lesilivere: I-XAGUSD Nosedives kwi-Base phakathi kweNgxelo ye-NFP eyomeleleyo yase-US
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Matshi 7
Ixabiso lesinyithi esimhlophe laba phantsi koxinzelelo olukhulu kwiseshoni yangaphambili kwaye latsalwa ngokufutshane ngaphantsi kwenqanaba le- $ 25.00. Ukuhamba ngaphaya kwe- $ 25.00 yokuqhekeka kuya kuyilahla intengiso yokuthengisa. Ukunqongophala okungapheliyo kuhlala kufanelekile kwinto yokuba urhulumente wase-US avelise isivuno, esathetha ukuphendula ingxelo eqinileyo ye-NFP, babuyile babuyela kumanqanaba okukhululwa kwangaphambili.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 28.90, $ 27.50, $ 26.00
Amanqanaba enkxaso: $ 24.50, $ 23.50, $ 21.89
Ukusuka kumbono wohlalutyo lobuchwephesha lwemihla ngemihla, i-bearish bias ikwafumana inkxaso kwi-XAGUSD ukusilela ukubuyela kwimeko yesiqhelo ngelixa ihlala ingezantsi ngokunyuka kwenkxaso ye-trendline kwi-25.50 yeedola phakathi kwe-bearish ezihamba phakathi kwe-5 kunye ne-13. Kulungiso, iibhere zinokujolisa kumgangatho ophantsi wemihla ngemihla yempembelelo ebambekayo kwi-24.01 yeedola ngoJan 18, 2021.
Kwiphepha le-flip, nayiphi na inzame yokubuyisela kwimeko yesiqhelo isenokubonakala njengethuba lokuthengisa elinokuthi libeke emngciphekweni wokukhawuleza ngokukhawuleza kufutshane nendawo yokuxhasa umgca wokuhamba. Ukuphuma okutsha kwesigqubuthelo esincinci kungatyhala i-XAGUSD ibuyele ngakwindawo yokubonelela nge-26.00-77 yeedola kwindlela eya kumanqaku ayi-27.00 ejikelezayo.
Kwixesha elizayo elingekude, ixabiso leXAGUSD kulindeleke ukuba liqhubeke nokuthengisa ecaleni lide liflise i-avareji ye-13 yokuxhasa, ebekwe ngaphezulu kwenqanaba le- $ 25.50. Iibhere zinokujonga ekujolise kuko kwangoko kwe- $ 24.50, ukwaphulwa kwayo kungabeka umngcipheko kwinqanaba lokufikelela kwinqanaba lama- $ 24.00.
Bearish uhlalutyo lwesakhelo sexesha elifutshane kunye neemvakalelo ezingalunganga zinceda iibhere ezithi ngoku zityeshele iimeko ezigqithileyo, kodwa uhlengahlengiso lwamaxabiso lunokulindelwa. Kwiseshoni elandelayo iziphakamiso eziphantsi kwendlela yokwenyuka kulindeleke ukuba zibonelele ngamathuba angcono okujoyina kwakhona imarike ye-bearish.
Ixabiso lesilivere: IXAGUSD isala iXhaswa kwiXesha elidlulileyo le- $ 27.00 Phawula phakathi kweDola yokuBuyiselwa kweDola
Ukuhlaziywa: 21 Februwari 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Februwari 21
Isilivere (XAGUSD) ixabiso lentengo liyaqhubeka nokuchasana nokuthengisa uxinzelelo phantsi kwamanqaku ayi- $ 28.00 njengoko isibini sihlala sixhaswa kwiidiphu ukuya kwinqanaba le- $ 27.00. Isinyithi esimhlophe siqhubele phambili ngokubaleka saya kwindawo ephezulu yokugcina imeko yayo ukukhetha okuhle kufanelekile Iingxelo zabathengisi abathile ziyaphela ngeempelaveki. Idola yajikeleza ezantsi nangona kulindelwe ukuba iphinde ibuye.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 30.00, $ 28.90, $ 27.92
Amanqanaba enkxaso: $ 26.77, $ 26.00, $ 25.00
Amaxabiso eXAGUSD akwazile ukuhlangana okwexeshana ukuya emantla edlulileyo uphawu lwe- $ 27.50 kwiseshoni yangaphambili emva kokuba ibuyile ukusuka kwinqanaba eliphantsi kwinqanaba leedola ezingama-26.48. Ngenxa yoko, iindlela zokubuyela kwimeko yesiqhelo ngoku zinokunyuka ziye kumgca wokumelana kwangoko kufutshane nenqanaba le- $ 27.92. Okwangoku, iveki engaphambi kokuphakama kwe- $ 27.95 kunye ne- $ 28.00 yenani elijikelezayo lenza izithintelo ngelixa ujolise kwincopho yenyanga ye- $ 30.00.
Kwicala elisezantsi, iibhere ziya kujonga kuvavanyo lwenqanaba le- $ 27.00 yengqondo, kunye novavanyo lukaFebruwari olusezantsi kwi-25.90 yeedola, ekunokwenzeka ukuba idlale ngokwaphula indawo yenkxaso ye- $ 26.77. Apha ngezantsi, indawo ebalulekileyo yenkxaso ijikeleze indawo yengqondo kufutshane nephawu le- $ 26.00, ephantsi komndilili wokuhamba we-5 kunye ne-13.
Njengoko kubonisiwe kwitshathi yeeyure ezi-4, isilivere ibonakala ibanjiwe ngaphakathi kwinqanaba lesithuba kwinqanaba lama- $ 26.77 kunye ne- $ 27.92 yamanqanaba. Kwimeko apho, ishaneli sexabiso sigcina i-XAGUSD inokwenzeka ukuba iqhubeke nokufumana inkxaso kwi-4 iiyure MA 5 kunye ne-13 yokuwela kufutshane nenqanaba le- $ 27.20 kwaye ubuyele ukwandisa inzuzo ngokuchasene neDola yaseMelika kwixesha elifutshane.
Ujoliso olunokubakho lokujolisa kuluhlu olungaphezulu kwinqanaba leedola ezingama-27.50 nakwiidola ezingama-28.90, okwangoku, akunakulindeleka ukuba iibhere ziphumelele kwintengiso. Oko kwathethi, ikhefu elizinzileyo apha ngezantsi liza kubonwa njengeempawu zokuqala zokudinwa okuphezulu kunye nokuguqula isibini sisengozini yokuba siwele phambili sijamelene nomceli mngeni kwisitshixo se- $ 26.00.
Ixabiso lesilivere: IXAGUSD ihlalela ukuJonga phantsi kweedola ezingama-28.00 Njengokuqokelelwa kweBulls
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Februwari 16
Ixabiso lesilivere (i-XAGUSD) liyaqhubeka ukuhla ngaphakathi kwe- $ 27.00 ukuya kwi- $ 28.00 kwingingqi njengoko abathengi bexhasa ithemba lokuhamba ngaphezulu kwe- $ 28.00 kwaye kwelinye icala, abathengisi kufuneka bahlaziye iphantsi yenyanga kungeniso. Isilivere ngoku ithengisa nge-27.05 yeedola ngeyunce, emele ilahleko ye-0.50% ngosuku.
Iinkunzi zeXAGUSD zizamile ukutyumza uJanuwari 6, 2021, isithintelo esidala esijikeleze indawo engama- $ 27.95 kodwa zabuya zaya kwinqanaba lama- $ 26.83. Ngenxa yoko, ukuqhubeka kwesicatshulwa kunokuba ngumceli mngeni kumgca othe tyaba wengqondo kwinqanaba leedola ezingama-27.50. Nangona kunjalo, ukuba imeko ihlala isaphula i-28.00 yamanqaku edlulileyo, incopho yenyanga ejikeleze i- $ 30.00 iya kuba kukujolisa kuko okulandelayo.
Ngenye indlela, ulwaphulo olungelolokwenyani lwendlela yenkxaso yangoko, ngoku ejikeleze inqanaba lama- $ 26.77, linokuthatha amaxabiso esilivere ukuya kwinqanaba eliphantsi kwi- $ 26.00. Nangona kunjalo, nabuphi na ubuthathaka obuthe kratya kufuneka buphule i-24.01 ephantsi yonyaka ukuze kungasebenzi i-XAGUSD ye-bullish run-up.
Ixabiso lesilivere libambe ukubuyela umva kwezobuchwephesha emva kokufumana ukuxhathisa kwinqanaba le-30.00 leedola. Nangona kunjalo, kwelinye icala, ixabiso leXAGUSD linokuthi lityhalelwe phantsi yi-MA 5 iwele i-MA 13 esezantsi kuluhlu lwama- $ 27.07 ukuya kwi-26.00 yeedola.
Okwangoku, ireyithi inokufumana inkxaso kwinqanaba le- $ 26.77 ethe tyaba. Kwaye kwelinye icala, isinyithi esimhlophe sinokufumana inkxaso kumgangatho osezantsi kufutshane ne- $ 26.00 kwimeko yokuntywila. Ke, ezinye izinto ezinokubakho ngaphezulu zinokubakho kwintengiso ngexesha leseshoni elandelayo.
Ixabiso lesilivere: I-XAGUSD igcina iRally ijonge ngaphesheya kwe- $ 27.00 kwiStimulus Optimism
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Februwari 8
Isinyithi esimhlophe sikwazile ukubuyisa ilahleko ngolwesiHlanu kwaye iyaqhubeka nokukhula ngexesha leseshoni yaseYurophu ngoMvulo. Isilivere (XAGUSD) iyakha ngolwesiHlanu isaphulelo ngaphezulu kwe- $ 27.00 njengoko idola yaseMelika ihleli icinezelwe ngelixa i-1.9T yokukhuthaza intembeko ithanda iinkunzi zeenkomo.
Uhlalutyo lobuchwephesha kwitshathi yemihla ngemihla lubonisa ukuba iSilver (XAG) iqhubela phambili kuvavanyo lokuchasana okuncinci malunga ne- $ 27.50. Ukuba abathengi bafumana indawo engaphezulu kwelo nqanaba, umqobo onamandla olandelayo kwi-27.92 yeedola unokuvavanywa. I-Index ye-Relative Strength Index (i-RSI) yemihla ngemihla ibambe ngaphezulu kwe-midline, iphakamisa ukuba i-bias ye-bullish ihlala ihleli.
Nangona kunjalo, ukuqhawuka okucacileyo kwenqanaba leedola ezingama-27.50, ezibandakanya umgca oxeliweyo okhankanywe ngasentla, kuyafuneka ukuba iinkunzi zeenkomo zingenelele. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umndilili ohambahambayo wenqanaba le-5 kwinqanaba leedola ezingama-27.20 linikezela ngokuchasana kwangoko nesicatshulwa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iXAGUSD yamva nje inokuthi ihlasele umphezulu ojikeleze inqanaba le- $ 27.50 ngaphambi kokujolisa kwinqanaba le- $ 28.90 yokuxhathisa ethe tyaba. Nangona kunjalo, umgca we-4-iiyure zokumelana nomjelo kwinqanaba le- $ 27.50 liya kucela umngeni kwiinkunzi, ikhefu eliza kuthi ngokukhawuleza likhokele ikhowuti ukuya kwinqanaba eliphezulu lenyanga le- $ 30.31.
Okwangoku, ikhefu elisezantsi lokuhamba okuphakathi kwe-13, kwinqanaba leedola ezingama-26.65 ngoku, liza kulanda amaxabiso ezinto zorhwebo kumgca wokuxhasa ishaneli, okwangoku zijikeleze inqanaba lama- $ 26.00. Imeko ekhethiweyo iya kuba yindawo ende engaphaya kwenqanaba le- $ 26.77 eneethagethi kwi- $ 27.50 kunye ne- $ 28.90 kumanqanaba okwandiswa.
Isilivere ibuyisela umva nge-13%
Isilivere mfutshane-khama ngokuchanekileyo? Kulungile ukufutshane ukucudisa imarike enkulu kangaka enomdla omncinci kakhulu kuneso sitokhwe (i-GME, i-AMC, njl njl.) Kodwa kukho ithuba elihle apha elingasokuze libe lincinci.
Isilivere iqale ukuhlanganisana ngoLwesine odlulileyo kwaye iqhubekile nokuhlangana kuyo yonke indawo yangoMvulo ukuya kwinqanaba le-30.1365 (iminyaka esi-8 ukuphakama) ukugqobhoza kwiindawo eziphakamileyo eziprintwe emva ngo-Agasti 2020.
Emva kokubetha amaxabiso aphezulu eSilver aphazanyiswe yi-12.80% ukuphinda uzame inqanaba langaphambili elaphukileyo.
Okwangoku siphinda sivavanye kwaye siyala ukuhlangana okukhulu kwamanqanaba.
Indawo yokungabikho kwezorhwebo (i-26.10-26.77) yokuhlangana kunye nepivot yeveki, ukubuyiswa kwe-61.8% kwentshukumo ye-bullish kunye nokubuyiselwa kwe-1.618 komlenze wokugqibela wokugcina. Zombini iithagethi ze-bearish kunye namanqanaba apho iinkunzi zeenkomo zingena khona.
Ikhefu elingaphezulu kwezorhwebo-lommandla liza kubangela isantya ukuya phezulu.
Amanqanaba okubukela ukuba le meko iyadlala ngama-28.40 kunye nama-29.80
← Entsha izithuba 1 ... 3 4abaDala izithuba →